Göteborg: Dhalinyarro loo soo qabtay falkii lugu beegsaday macbadka Yahuuda laheyd | Somaliska
Booliska magaaladda Göteborg, ayaa shaaca ka qaaday ineey gacanta ku soo dhigeen saddex dhalinayarro ah oo la rusan yahay ineey ka dambeeyeen falkii isku dayga ahaa ee lugu doonayey in dab la qabadsiiyo macbad Yahuudu leedahay oo ku yaala magaalada Göteborg.
Muuqaalo booliska ay heleen ayaa waxaa ka muuqdo sedex dhalinyarro oo da’dooda tahay labaatan jirro. Kuwaa oo xirnaa dhar mad madow islamarkaasina ka baxsaday goobta. Booliska ayaa sidoo kale sheegay in labbo ka mid ah la rusan yahay ineey falkaasi sameeyeen halka kan sadexaad uu yahay mid la tuhunsan yahay.
“Waanu heeyna, oo baaritaano qabyo ayaa jira oo aannu dooneynaa inaan dhameeyno” ayey tiri Stina Lundqvist oo ah xeer ilaaliyaha gobolka oo u warameeysay wargeyska Göteborgs Posten. Stina waxaa kale oo ay sheegtay in falkani aan la oran karin waxaa salka uu ku haya kooxaha afkaartoodu fogtahay ee mayalka adag balse salka ku heeyn karta xiisadda ka aloolsan Falastiin.
Ugu dambeyntii falkan ayaa yimid habeenimaddii axadda soo galoosay oo ay dhalinyaradani oo ka soo baxay meel lugu caweeynayey balse markii dambe bartilmaameedsaday macbudkaasi Yahuuda. Waxaana uu sidoo kale imanaya xilli Trump-ka dalkaasi Mareykanka uu sheegay arbacadii ina soo dhaaftay in magaaladda madaxda Isra’iil u aqoonsan yahay magaaladda Jeresulem tanoo iyadana dunida muslinka carro weyn ka dhalisay.
Nin soomaalida Iswiidhan ka mid ah oo u xuubsiibtay taageere kooxda Daacish